Kushongedza - Crafts On | Crafts On (Peji 2)
5 hunyanzvi hwekuvandudza makamuri edu ekugara uye / kana yekurara ine makushion
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona 5 mazano ekugadzira kugadziridza makamuri edu ekugara uye/kana…
Mwoyo kana maruva emoyo
Mhoroi mose! Muhunyanzvi hwanhasi tichaona maitiro ekugadzira moyo wekushongedza paZuva raValentine ...
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira mhizha yekushongedza paZuva raValentine ikozvino...
Crafts yekushongedza nemakori
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona akati wandei mhizha yekushongedza nemakoriki. Mushure meizvi…
Mazano ekushongedza mushure mekubvisa zvishongedzo zveKisimusi
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona pfungwa shanu dzekushongedza mushure mekubvisa zvishongo...
Mazano ekushongedza tafura pamabiko eKisimusi uye kudya kwemanheru
Mhoroi mose! Nemamiriro ezvinhu aripo zvino zvakanyanya kuoma kuungana, asi kunyangwe zvakadaro, kunyangwe tikasangana nevanhu vashoma kuti ...
Mazano ekushongedza zvipo zvedu zveKisimusi
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona akati wandei mazano ekushongedza zvipo zvedu kuti tivape ...
Crafts yekushongedza muti weKisimusi 2
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira chikamu chechipiri cheiyi nhevedzano yehunyanzvi hwatinogona ...
Snowy pinecones yekushongedza paKisimusi
Mhoroi mose! Muhunyanzvi hwanhasi tichaona maitiro ekugadzira aya mapineapple echando, akakwana pakushongedza ...
Zvirongo zvakagadziriswa ne decoupage
Kana iwe uchida kudzokorodza, hechino ichi chikumbiro chakakwana. Isu tichashandisa zvigubhu zviviri kana zvigaba uye tozvishongedza nemaitiro e decoupage.
Crafts yekushongedza muti weKisimusi 1
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira chikamu chekutanga chenhevedzano yehunyanzvi hwatinogona ...
5 Kisimusi yekushongedza mhizha
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira 5 Kisimusi yekushongedza mhizha. Aya mhizha akasiyana, kubva ...
Packet blinds ye roman blind windows
Usapotsa nzira yekusarudza yako rudzi rweketeni pahwindo rako. Takasarudza mapofu sechikamu chikuru uye chakanaka mukugadzirwa kwayo.
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tichaona akati wandei mhizha yekushongedza imba yedu nekusvika ...
Kana iwe uchida kudzokorodza, pano une hari diki dzakagadzirwa nemagaba egirazi uye nerumwe tsigiro yemapuranga kuti ive yekare.
Mhoroi mose! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekuomesa nyore zvidimbu zveorenji kana ...
Kadhibhodhi ruva bouquet, yakakwana kuve neruzivo
Mhoroi mose! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira iyi yakanaka maruva, ese ...
Mhoroi mose! Autumn iri kuuya uye nayo, zvingangoita kuti isu tinoda kuchinja kushongedzwa kweimba ne ...
Kupenda makadhibhodi kana marquetry bhodhi kunge huni
Mhoroi mose! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekuita huni iyi kupedzisa sei ...
5 mhizha yekushongedza nharaunda-yechinyakare
Mhoroi vanhu vese! Muchinyorwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira akasiyana siyana ekushongedza makamuri edu nemhepo ...
Nyore yekushongedza boho kupenda
Mhoroi mose! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira pendi iyi yepakutanga kuti ive yakakwana ...
Unyanzvi hwounyanzvi hwemba, hwakakwana kutora iyo nguva mumaawa anopisa
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi isu ticha taura nezve maitirwo emabasa akasiyana siyana ayo kunze kwekuvaraidza ...
Mhizha kunakidzwa nebindu redu muzhizha
Mhoroi mose! Muchinyorwa chanhasi tiri kuzokuunzira mazano akati wandei ekuita mune yedu ...
Mhete mubati furemu
Iyi yakadzoreredzwa mhete yemhete ndiyo yakasarudzika sarudzo yekuve neyako yakajeka uye epakutanga mhete mukuona mune yakakosha nzvimbo.
Gadzira iyo fanicha yenzvimbo inotonhorera-kunze nenzira yakapusa
Mhoroi mose! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira hwaro hwefanicha kugadzira ...
Nakidzwa nebindu rako uye chinjiri munguva yezhizha
Kubva kutanga kwaJune kusvika muna Gumiguru (zvinoenderana nenzvimbo yega yega), inguva yenguva huru ...
Nyore maruva muhari dhodhi nemaruva mapoto
Mhoroi munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tiri kuzokupa imwe sarudzo yekuita maruva ekushongedza edu ...
7 maruva ekugadzira nepepa kana furo
Mhoro munhu wese! Nhasi tinokuunzira nzira nomwe dzakasiyana dzekugadzira maruva. Unogona kuwana zvakasiyana zvinhu zvakaita sebepa, bepa ...
Nyore maruva muhari dhora
Mhoroi munhu wese! Mukugadzira kwanhasi tichaenda kunoona maitiro ekugadzira chidhori ichi nemapoto. Inzira…
5 origami yekugadzira nemapepa etoilet uye kushamisika
Mhoroi munhu wese! Zvino izvo kupisa kuri kuuya, isu tinoda kukoka shamwari shoma kuti vanwe pane edu materu ...
Lawn nzira yedziva rekushambira
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira iyi yakanaka huswa nzira yekusvikako ...
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira yekutanga-in-one tichishandisa zvinhu ...
Dombo denderedzwa remuti
Mhoroi munhu wese! Muhunyanzvi wanhasi tinokuunzira zano idzva rebindu. Ngatiitei ...
4 mazano ehunyanzvi ekupa zvinhu zvedu mukana wechipiri
Mhoroi munhu wese! Nhasi tiri kuzokupa iwe akati wandei mazano kuti iwe ugone kushandisa zvekare zvimwe zvinhu zvatiinazvo kumba uye ...
Pfungwa dzekuita mubindu redu takatarisana nemamiriro ekunze akanaka
Mhoroi munhu wese! Nhasi tinokuunzira kuunganidzwa kwemazano edu akanakisa ekuita mubindu redu uye nekushongedza ...
Pfungwa dzekushongedza imba yedu
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tiri kuenda kunoona mamwe mazano akakwana ekushongedza imba yedu. Zvimwe zve…
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tiri kuenda kunoona maitiro ekugadzira aya anonakidza bindu ladybugs. Ivo vakuru ...
Central yekushongedza gadheni nezvirongo
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira uku kushongedzwa nezvirongo zvekuisa ...
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira macrame mirror. Aya magirazi ...
Tafura nemacheya ane matanda egadheni redu
Mhoroi munhu wese! Nhasi tinokuunzira zano hombe rebindu redu. Ngatione maitiro ekugadzira nzvimbo ye ...
Pfungwa yekushongedza kona yemunda
Mhoroi munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tiri kuzokuratidza maitiro ekuita iyi yakanaka zano yekuisa ...
Kuputira mwana bhasikiti nenzira yekutanga
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tiri kuzokupa zano rekutanga kuputira mwana bhasikiti ...
Keteni rakashongedzwa nemapombi
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekushongedza keteni yakashongedzwa nemapom poms. Ari…
Kenduru mubati nemapistachio makomba
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tinokuunzira nzira yekutanga yekushandisa mapistachio makomba….
5 mhizha yekushongedza muchirimo
Mhoro munhu wese! Nhasi tinokuunzira mazano mashanu ekushongedza imba yedu muchirimo. Izvo zvipuka zvakapusa ...
Chimiro chakashongedzwa netambo nemvere dzemakwai
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekushongedza furemu netambo nemvere. Zviri…
6 hunyanzvi netambo dzakakwana kushongedza
Mhoro munhu wese! Nhasi tinokuunzirai matanhatu mazano ehunyanzvi akagadzirwa netambo akakwana kushongedza imba yedu, ...
Katsi yakaumbwa pendant
Iyi paka-yakaita pendendi inzira yepakutanga yekushongedza chero chikamu chebhegi kana kuitakura sekiyi kiyi.
Inokurumidza uye yakapusa kenduru mubati ine macorks
Mhoro munhu wese! Mune hunyanzvi hwanhasi tichaona maitiro ekugadzira ichi chinobata kenduru chine macorks. Ari…
Nyeredzi dzakasungirirwa paKisimusi
Neshinda shinda uye chena glue tichagadzira dzakaomarara nyeredzi dzinozosungirirwa mune chero kona yeimba yako.
4 emhizha yekushongedza ino Kisimusi
Mhoroi munhu wese! Mamwe mazuva akakosha seKisimusi yava kusvika, ndosaka mu ...
Needu ese ruzivo tine nzira yakapusa yekugadzira yakagadzirirwa uye yepakutanga Kisimusi wreath, iwe uchada mhedzisiro yayo
3 emhizha kugadziridza imba yedu
Mhoro munhu wese! Muchinyorwa chanhasi tiri kuzokuratidza matatu mazano ekugadzirisa imba yedu. For…
Muroyi kushongedza kweHalloween
Mhoro munhu wese! PaHalloween chimwe chezvishongo chikuru chine chekuita nenyika ye ...
Mhoro munhu wese! Iye zvino zvatatanga nguva apo mwenje unotanga kudzikira, iri sarudzo yakanaka kuisa ...
Centerpiece yekushongedza mumatsutso
Mhoro munhu wese! Nekusvika kwekutonhora, iwe unoda kuchinja kushongedza kweimba, kunyanya imba yekutandarira, ye ...
Kurumidza uye nyore keteni kiramba
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tiri kuzokuratidza maitiro ekugadzira inokurumidza keteni kiramba uye ...
4 mhizha dzeimba
Mhoro munhu wese! Mune yanhasi posvo tiri kuzoratidza 4 yakanaka hunyanzvi hwemba yedu. Kune akasiyana ...
5 maruva ari nyore kugadzira nepepa uye / kana kadhibhodhi
Mhoroi munhu wese! Muchinyorwa chanhasi tinokuunzira nzira shanu dzekugadzira maruva nepepa uye / kana kadhibhodhi ku ...
Nounyanzvi uhu unodzidzira kushongedza izvi zvekutanga zvemapuranga zvipfeko. Iwe unongoda pendi diki uye nehunyanzvi.
Makenduru mashanu akasiyana emumba
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaona maitiro ekugadzira makenduru mashanu akasiyana epamba, rimwe nerimwe ...
Kana iwe uchida kuverenga nekumaka ako mapeji, iwe unogona kugadzira aya macactus-akaumbwa mabhukumaki. Vane chimiro chinonakidza chemabhuku ako
Nzira yekugadzirisa sei imba yekare yekurara
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichaona maitiro ekugadzirisa imba yekurara yekare kuti tipe ...
T-shirt jira jira keteni macramé
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichagadzira iyi macramé-type jira keteni. Izvo zvakakwana kune ...
Mhizha netambo dzekushongedza muzhizha
Mhoro munhu wese! Zhizha rasvika uye naro, kupisa. Saka nhasi tiri kuzokupa imwe ...
Yakashongedzwa keji yekushongedza matafura
Uhwu hunyanzvi huri nyore kuti iwe uite kumba nezvinhu zvekutanga-ruoko. Iyo keji iyo ...
Anoshongedza tambo mbiya
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichagadzira iyi yakanaka tambo mbiya. Zviri nyore kwazvo ku ...
Kudyara nekara yemarara
Mhoro munhu wese! Mune hunyanzvi hwanhasi tichagadzira ino yakanaka yekudyara kubva mudhara dengu remarara. Zvakanaka…
Maruva ane makatoni ezai
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichagadzira mamwe maruva nemakatoni emazai. Icho chigadzirwa ...
Bhora rinoshongedza nepepa rechina
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira bhora rekushongedza nepepa rechina. Izvo zvakakwana kushongedza ...
Mudyari akashongedzwa netambo
Mhoroi munhu wese! Iye zvino sezvo mamiriro ekunze akanaka asvika, ndiyo nguva yekuita kuti matareji ashongedzwe ...
3 epakutanga mabhuki ekushongedza masherufu edu
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichaona kuti tingaite sei mabhuki matatu ekutanga kushongedza masherufu edu….
Kushamisika bhokisi kuturika mapikicha
Usapotsa pane ino inoshamisa uye yakapusa kushamisika bhokisi pikicha yakaturika hunyanzvi. Iwe unongoda zvigadzirwa zvishoma uye nenguva shoma.
Pom pom garandi
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi uhu tichagadzira ino yakanaka pom pom garandi. Zviri nyore kwazvo kuita uye ...
Furniture inogadzirwa nematanda emadhoiri
Dzidza maitiro ekugadzira imwe fenicha yepakutanga inogadzirwa neayo ice cream zvimiti, ivo vanove vakanaka kutamba nezvidhori uye vana vese vachada.
Mhoroi munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira vhasi reValentine nekudzokorodza chirongo chegirazi, ...
Vintage yakaumbwa musuo hanger
Iyi hunyanzvi ndeimwe nzira yekushongedza kona iyoyo yaiita kunge isina chinhu. Icho chimiro chine denderedzwa chimiro uko ...
Tswanda netambo yejute yekurembera
Imwe nzira yekugadzira yekushongedza pfungwa kana yako pfungwa iri yekugadzira chimwe chinhu chepakutanga. Tinogona kugadzira mabhasikiti netambo yejute, yakapusa uye inokurumidza.
Rambi revana rine makapu epurasitiki
Nemagirazi mashoma ndakakwanisa kugadzira mwenje nekubata kwevana. Icho chikumbiro chakanakisa chebato revana vadiki
Napkin pom, yakanaka uye yakapusa
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira yakapusa napkin pomu yakanaka kwazvo ...
Kisimusi kushongedzwa kwemashefu
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichaenda kunogadzira Kisimusi yemashefu ayo akanaka kwazvo ...
Dzokororazve bhokisi reshangu nenzira yekutanga
Kana iwe uchida kudzokorora, apa iwe une chaiyo chaiyo nzira yekuzviita, iwe unongofanirwa kuve uine shangu bhokisi kuti ukwanise kugadzira bhokisi
Garland ine mandarin kana orenji peelings
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chemazuva ano tichagadzira korona ine mandarin kana pearlings emarangi. Zviri…
Snowflake chishongo cheKisimusi muti
Mhoro munhu wese! Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira chishongo chechando chechando chemuti ...
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi tichagadzira yakanaka yeKisimusi yepakati. Izvo zvakakwana kune ...
Shongedza chipo nemaruva akaomeswa
Mhoro munhu wese! Mune ino hunyanzvi tiri kuzokupa iwe zano rekushongedza zvipo nemaruva akaomeswa uye ...
Kuputira chipo cheKisimusi nenzira yekutanga
Mhoro munhu wese! Kisimusi iri kuswedera, ndosaka tichizogadzira hunyanzvi hwekuvhara ...
Maviri napkin ekushongedza mazano ezviitiko zvakakosha
Mhoro munhu wese! Muhunyanzvi hwanhasi, tiri kuzokuratidza maviri ekushongedza mazano nemapapiro ezviitiko ...
Mhoro munhu wese! Tinokuunzira imwe mhizha yekushongedza paHalloween uye nezvinhu zvakasikwa: mutsvairo wemuroyi. Unoda ...
Mhoro munhu wese! Mune ino hunyanzvi tiri kuzokuratidza maitiro ekugadzira kenduru iri nyore kwazvo yeHalloween. Unoda kuona…
Anonakidza bat kuti aite paHalloween nevana
Mhoroi munhu wese! Halloween iri kuswedera padhuze nekudaro, mune ino hunyanzvi tinokuunzira maitiro ekugadzira bat ...
Isu tinoita yekuvhuvhu centerpiece
Mhoro! Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira yekuvhuvhu yepakati yekushongedza imba yekutandarira kana imwe ...
Inovhara magetsi metres
Pamusuwo edzimba panowanzo kuve nemamita emagetsi asingatarisike. Isu tichagadzira yakareruka mita yekuvhara kuti tigadzirise
Origami yemapepa etoilet
Muchigadzirwa chanhasi tichaita mhando nhatu dzemitambo yechimbuzi mapepa. Mafomu…
Dzidza maitiro ekugadzira muroti
Chidzidzo chinonyatsonakidza kwauri kuti udzidze maitiro ekugadzira chiroto chinobata. Yakagadzirwa nezvinhu zvinoshanda uye hunyanzvi hwekuita nevana.
Rustic orenji kenduru, yakanaka uye nekunhuhwirira kwakanaka kwazvo
Muchigadzirwa chanhasi tiri kuzogadzira yakanaka rustic orenji kenduru kushongedza makamuri edu, kunakirwa neyako ...
Natural kenduru kenduru, nekukurumidza uye kunhuwa kukuru
Muchigadzirwa chanhasi tiri kuzogadzira kenduru yemoni kenduru, yakashongedza kwazvo, yakakwana kune epakati ...
Pfungwa yekugadzira manhamba ekuzvarwa emakeke
Wakaneta neyakajairika makenduru manhamba emakeke? Tinokupa zano rekugadzira manhamba ekuzvarwa, e ...
Isu tinogadzira dhirowa yemakomba mufenicha yedu
Mubasa iri tichagadzira dhirowa remakomba emidziyo kana masherufu. Zvakanaka chaizvo, zvakanyanya ...
Rainbow gore rekushongedza yekurara kwevana
Iyi hunyanzvi iri nyore kwazvo kugadzira muraraungu gore iro vana vachada. Unoda nguva shoma uye zvishoma zvigadzirwa.
Matatu mazano ekushongedza nemakadhi ekufamba
Iwe unofarira maposikadhi, unoatenga here asi ipapo haunyatso kuziva kuti kupi uye anopedzisira ave mudhirowa? Tinokupa iwe matatu ...
Curtain sunga netambo uye meno
Muchigadzirwa chanhasi tichagadzira keteni inosunga netambo uye chikafu cheChinese chikafu, ...
Isu tinogadzira vhasi nekushandisa zvakare bhodhoro regirazi
Nemamiriro ekunze akanaka tinoda kushongedza, nekuda kweizvi tichagadzira vhasi nekushandisa zvakare bhodhoro regirazi. Yakakwana pachayo kana sevasi ruva
Isu tinogadzira marambi maviri ekushongedza nemabhodhoro egirazi uye mwenje yakatungamirwa
Isu tinogadzira marambi maviri ekushongedza nemabhodhoro egirazi uye mwenje yakatungamirwa, zviri nyore kwazvo uye zvepakutanga, mukuwedzera pakuita chero nzvimbo kugamuchirwa.
Isu tinogadzira nzvimbo iri muhari yakatsemuka
Une hari yemaruva yakaputsika here? Usarase, tinogona kugadzira hari dzemaruva dzepakutanga nacho, senge ino nzvimbo iri muhari yemaruva yakaputsika.
Chaicho-chinotaridzika chakagadzirwa chinotapira terrarium
Zvirimwa zvinojekesa makamuri, asi dzimwe nguva hatina nzvimbo yakakodzera yemuti mupenyu. Tichaita inonaka terrarium inotaridzika kunge yechokwadi?
Bhokisi rakagadzirwa neayo ice cream zvimiti zvekushongedza
Hunyanzvi hwekugadzira bhokisi diki remapuranga rakagadzirwa nematanda echando. Yakanakira kudzokorodza zvinhu, uye sechinhu chekushongedza.
3 mazano ekushongedza mwana wako shawa nenzou
Yese yekugezesa yemucheche ipati uko kunouya kwemwana kune chero imba kunopembererwa. Mune ino posvo ...
Maitiro ekushandura tangi rehove kuita chinhu chekushongedza
Pfungwa yekushandura tangi diki rehove kuva chinhu chekushongedza, kutora mukana wezvinhu zvatiinazvo kumba.
Maitiro ekugadzira ekushongedza pendende ne ice cream zvimiti
Tsananguro yemagadzirirwo emafuremu nema ice cream stick, kumisikidza uye kupenda kadhibhodhi, wozvisungirira uchishandisa tambo gobvu. Unyanzvi hwakajeka!
Centerpiece nemaruva, mabwe uye kenduru
Muhunyanzvi uhu, tichagadzira yepakati peimba yedu kuti ipfeke mune yakanaka mamiriro ekunze. Go…
Sipo tireyi inodzokorodza mapani epurasitiki
Muhunyanzvi hwekupa sipo, isu taishandisa dhisiki, nhasi tiri kuzoshandisa bhodhoro repurasitiki kugadzira ...
Easy crepe bepa lotus ruva
Tichagadzira ruva rejotasi nemapepa echikara, akakwana pakushongedza imba. Inogona kupfeka yega, ye ...
Soap dispenser inogadzirisazve bhodhoro regirazi uye mupurasitiki
Tichaita hunyanzvi zvakare kudzokorodza zvinhu zvatiinazvo kumba uye isu tichagadzira mutengesi ...
Cherry maruva, akakwana kushongedza imba mune yakanaka mamiriro ekunze
Aya mavhiki emamiriro ekunze akanaka zvinoita sekunge iwe unoda kuchinja zvishoma kushongedzwa kweimba kwechimwe chinhu chitubu….
Rock mabhuku, anokurumidza kugadzira
Muhunyanzvi uhu tichagadzira bookend nematombo. Iwe uchaona kuti ihwo hunyanzvi hwakajeka uye kuti iyo ...
Kupisa silicone roses nematombo matsvuku
Tichagadzira ruva nesilicone inopisa, yakakwana kushongedza magumo emapeni edu kana mapenzura. Vanogona zvakare…
Kushongedza muti kudhirowa pabazi
Tsananguro nemaitiro ekugadzira muti unoshongedza kubva kubazi. Chigadzirwa chinonakidza chisingazosiye chero munhu asina hanya!
Muhunyanzvi uhu tichagadzira minhenga yekushongedza, nemaitiro e macramé. Iri peni rakanakira ...
Isu tinogadzira yakapusa nyeredzi-yakafanana neyakarota mubati.
Kune nzira dzakasiyana dzekugadzira vanorota vanobata, mune ino hunyanzvi isu tichagadzira yakapusa kurota inobata, mune iyo mambure ...
Kugadzira girazi rekushongedza nekuomesa mashizha egirini
Isu tinotsanangura maitiro ekugadzira girazi rekushongedza nekutora mashizha egirini ezvirimwa uye nekuomesawo kuitira kuti vachengete ruvara rwavo.
Maruva chinhu chakakosha mumabasa mazhinji eumhizha. Mune ino post ini ndiri kuzokuratidza 3 Maruva ...
Nzira yekugadzira shinda
Ungawana sei pikicha yeshinda, inozivikanwa seyadhi, uye usafe uchiedza. Tsananguro yemubatanidzwa, mikana uye kujekesa.
Isu tinogadzira makenduru akachengeteka uye anodziya epamba
Iwe unofarira here ambient mwenje wemakenduru? Ungade here imwe nzira yekuti ubatidze makenduru uye izvo ...
3 hunyanzvi hweZuva raValentine nemagirazi egirazi
Pane zvishoma zvishoma zvasara zveZuva raValentine kana Zuva raValentine. Inopembererwa muna Kukadzi 14 uye nguva dzose ...
Maitiro eku decoupage pasina kuunyana uchishandisa iyo iron.
Decoupage ndiyo hunyanzvi iyo inosanganisira yekugadzira dhizaini nemaputi anonamatirwa neglue. Dzimwe nguva masikati ano akaomarara uye vanobuda. Dzidza kuita dhizaini yekunatsa isina ndiro, yakakwana kune chero nzvimbo uye inoramba isina kuunyana, mhedzisiro yacho inoshamisa.
Maitiro ekugadzira mifananidzo ine tsamba uye kunyorera
Ndiri kuzokuratidza maitiro ekugadzira mifananidzo ine tsamba uye kunyorera, iwe uchaona kuti iri nyore nzira uye ingangoita ...
2 yeKisimusi hunyanzvi hwekudzokorora makadhibhokisi mabhokisi.
Mune yanhasi posvo isu ticha dzidzira maitiro ekudzokorora macardboard mabhokisi ekugadzira maviri maKisimusi mafoto mafoto. Izvo zvakanaka kuisa zviyeuchidzo zvako.
Mabhora ekushongedza muti wako weKisimusi uri nyore
Kisimusi mabhora ndiwo akashongedzwa zvakanyanya kushongedza muti wedu pamazuva aya, asi dzimwe nguva anodhura kwazvo. Mune ino posvo ini ndiri kuenda kukudzidzisa iwe maitiro ekugadzira Dzidza maitiro ekugadzira aya eKisimusi mabhora ekushongedza muti wako. Iwo akakwana uye anodhura kwazvo kugadzira akawanda emarudzi akasiyana siyana.
Maitiro ekudzokorora maCD eKisimusi. Elf Santa Claus.
Muchinyorwa chanhasi ndinokuunzira zano nyowani kwaunogona kudzidza kudzokorora ma cd kana ma discs aunazvo kumba uye asingashande nekuti iwo Dzidza kudzokorora cd kana dvd uye kuvaka iyi elf kana elf yeSanta Claus yekushongedza Kisimusi uye uipe yakanakisa kubata.
Maitiro ekuti udzorezve hanger yekushongedza kamuri yemwana
Kamuri yemucheche inzvimbo inofanirwa kuve yakanaka uye yakasununguka kugamuchira iye achangozvarwa. Mune ino posvo ini ndiri kuzokudzidzisa maitiro ekugadzira iyo Dzidza kugadzira ino posita ine zita remucheche yekushongedza kamuri yemwana wako nekudzokorodza hembe hanger.
Akapusa mapepa maruva ekushongedza hunyanzvi hwako
Mapepa maruva ndeimwe yeanogadzira ayo anonyanya kushandiswa muzvirongwa zvese senge kushongedzwa kwemabiko, mazuva ekuzvarwa, chitubu, nezvimwewo. kubata kwepakutanga.
Eva rubber clown yekushongedza mapato evana
Clown mavara anowanikwa pamapati mazhinji. Mune ino posvo ini ndiri kuzokudzidzisa maitiro ekugadzira iyi yakakwana eva rabha kuti ipe iyo yekutanga kubata kuti Dzidza maitiro ekugadzira iyi eva rabha clown yekushongedza chero chikamu chebato rako kana chevacheche chekuzvarwa zvipo, zvinotaridzika zvakanaka.
Kudzokorodza kwealuminium magaba. Decoupage yevanotanga
Mune ino posvo ini ndiri kuenda kuzokudzidzisa iwe nzira yekugadzirisa zvakare aruminiyamu makani uye kuashandura iwo mune ino fashoni shabby chic maitiro. Unogona kuishandisa penzura.Dzidza maitiro ekudzokorora marangi ealuminium neiyo decoupage maitiro mune mashoma matanho uye zvakanyanya hupfumi neiyi nhanho-nhanho dzidziso.
NZIRA DZEKUITA KUTI DECORATIVE FELT ANOKONZESA Nhanho NENhanho
Mune ino dzidzo ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira yakanzwa cactus. Izvi zvirimwa zvine fashoni uye zvinoshongedza kwazvo, asi dzimwe nguva nekuda kwezvimwe zvikonzero kwete.Muna iyi dzidziso ndinokudzidzisa maitiro ekugadzira iyo yakanzwa cactus. Tichadzidza kuzvigadzira isu pachedu nenzira yekugadzira asi zvakaenzana.
UNOGADZA SEI POTI POTI NEICE CREAM STICKI - Nhanho NENHATSO
Mune ino dzidziso ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira yakanaka wall yekudyara uchishandisa popsicle matanda kana akapfava matanda matanda Zviri nyore chaizvo uye zviri chaizvo.Mudzidziso iyi ndinokuratidza maumbirwo akagadzika ekugadzika pamadziro uchishandisa ice cream matanda. Zviri nyore kwazvo uye zvinoshongedza kwazvo.
Shongedza kamuri rako neiyi evha rubber pennant uye pom pom
Iyo pennants inozivikanwa kwazvo kushongedza makamuri nemapati evana. Mune ino posvo ini ndiri kuzokudzidzisa kuti ungagadzira sei peni iyi ine vashoma kwazvo.Dzidza maitiro ekugadzira iyi pennant yakakwana kushongedza kamuri yako kana chero kona yeimba yako nezvinhu zvishoma kwazvo, uchazvida chaizvo.
DIY inoratidzira magirazi ako nematanda emapuranga mumaminitsi mashanu
Zvishongo uye zvishongedzo zvinoratidza ndeimwe yezvinhu zvekushongedza zviripo mumakamuri edzimba dzese. Mune ino posvo ini ndiri kuzodzidza maitiro ekugadzira iyi kuratidzwa nematanda emapuranga ekushongedza imba yako mumaminetsi mashoma uye woisa magirazi ako kana zvishongo.
Mufananidzo furemu wezhizha. Yakakura kune vana
Dzidza maitiro ekugadzira ino yezhizha foto furemu nezvinhu zvakadzokororwa, hunyanzvi hwakakwana hwevana pazororo rino.
Muchidzidzo ichi ndinokuunzira mazano matatu ekuti ugadzirise magaba uye woaita zvinhu zvakanaka zvekushongedza zvemba yako. Bhokisi retishu, chinobata kenduru uye vhasi yakaturika yauchazopa hupenyu hwechipiri kune izvo zvinhu zvaizoraswa.
Decoupage flowerpot inodzokorodza midziyo yepurasitiki
Dzidza maitiro ekudzokororazve mapani epurasitiki uye uashandure iwo mapoto e decoupage yekushongedza chero kona yeimba yako uye nekupa iyo yepakutanga kubata.
Kuteedzera huni chiratidzo chekushongedza kamuri yako
Dzidza maitiro ekugadzira ichi posita, chakanakisa kushongedza musuwo wekamuri rako uye nekuchipa kubata kwechirimo, chakanakira aya mazuva.
Tichaona maitiro ekushandura bofu rakapfava kuita rakakosha uye rakasarudzika, kuchichinja zvinoenderana nezvido zvako, nemamwe mazano anogona kukubatsira.
Maitiro ekugadzira bepa remaruva bhokisi kushongedza yako kamuri
Dzidza maitiro ekugadzira iyi yekushongedza bhokisi nemapepa maruva akakwana kune chero kona yeimba yako kana scrapbooking chirongwa
3 MAZANO AKANAKA NESILICONE MUGUNI KANA HURE-FUSE GURU
Muchidzidzo ichi ndinokuunzira matatu mazano ekuti uite neinopisa melt glue kana inozivikanwa zvakare sepfuti yesilicone kana inopisa silicone. Icho chishandiso chakakosha mune chero kona yekona saka zvirokwazvo vazhinji venyu mune imwe.
Nzira yekugadzira maruva mapoto neakwegura huni mazino
Muchidzidzo ichi ndinokuratidza maitiro ekugadzira hari dzako pachako uchishandisa mazino kana anozivikanwa semazino. Kunyangwe iri chinhu chakakosha zvishoma, sezvo ichigadzirwa nematanda tinogona kugadzira zvinhu zvakanaka kwazvo uye nekuvapa iyo yekumhanyisa yekubata nekupedzisa kwatinoda.
Dzidza maitiro ekugadzira polka dot vases.
gadzira polka dot vases, zviri nyore uye zvakapusa kudzidzira kumba kana neshamwari, kupa kana kushongedza chero kona yedu.
Centerpiece yemutambo wevana
Nzira yekugadzira yepakati petafura yevana nemabhaluni uye jelly bhinzi. Vana vachafadzwa nenzvimbo ino.
ngatione maitiro ekugadzira mwenje wekubatisisa zvakare gaba re tuna. Yakanyanya nyore kuita uye nenzira iri nyore uye ine hupfumi.
Maitiro ekugadzira shizha rakaumbwa tireyi, iwe unozoshamisika kuti zviri nyore sei.
Ngatione maitiro ekugadzira tireyi-yakaita tambo. Inogona kushandiswa kuishandisa nenzira yaunoda zvakanyanya, inoshanda uye yekushongedza.
Unicorn bhegi yekushongedza mapato nemasipi
Dzidza maitiro ekugadzira iyi yakanaka unicorn bhegi kana hamvuropu yekushongedza mapato ako uye nekuazadza nemasipi kana kadhi rekukwazisa
4 ekushongedza mazano uchishandisa zvipfeko
Muchidzidzo ichi ndinokudzidzisa maitiro ekugadzira mana akasiyana emhizha uchishandisa zvipfeko. Tsvaga kuti vakataridzika zvakadii nechinhu chakareruka uye chezuva nezuva.
Kadhibhodhi tsamba dzekushongedza yako kamuri kana tafura
Dzidza maitiro ekugadzira aya makadhibhokisi akakwana kushongedza yako kamuri kana chero kona yeimba yako uye nekuipa yakakosha kubata.
Eva rabha yemvura ruva iri nyore kwazvo kushongedza imba yako
Dzidza maitiro ekugadzira iyi evha yerabha yemvura ruva nenzira iri nyore, nekukurumidza uye nemhedzisiro inoshamisa, yakakwana pakushongedza imba yako.
Yevha yevhavha yemusuwo hanger ine kawaii gore
Dzidza maitiro ekugadzira iyi hanger pamusuwo wemwana wako. Yakagadzirwa nevha rabha uye iri nyore kwazvo uye inoratidzika sepakutanga.
Maitiro ekugadzira yakagadzirirwa imba yako pabhodhi pamadziro
Ngatione maitirwo ebhodhi rakagadzirwa pamadziro. Mune ino kesi iri bhodhi rakaumbwa kunge nhandare yenhabvu.
Mune ino dzidziso ndinokuunzira mashanu akareruka uye asingadhuri mazano ekugadzira ekushongedza uye anobatsira zvinhu aine ice cream matanda aunogona kuzviitira iwe.
Maitiro ekugadzira nhare mbozha mune chimiro chekawaii cookie - STEP BY STEP
Mune ino dzidziso ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira nhare mbozha mune chimiro chekawaii kuki. Unozorora nharembozha yako paunenge uchishongedza nehofori kawaii kuki.
Maitiro ekushongedza magirazi ane marbled mhedzisiro - DIY iri nyore uye nekukurumidza
Mune ino dzidzo ini ndinokuratidza maitiro ekushongedza magirazi aine marbled mhedzisiro, kunyangwe iwe uchigona kuisa nzira iyi kune chero girazi kana ceramic chinhu.
Margarita akagadzirwa nemapurasitiki ekupa sezvipo
Dzidza maitiro ekugadzira iyi margarita nekudzokorodza mapurasitiki ekushongedza kona yeimba yako uye kuti iite seyakanaka kwazvo uye ine hushamwari.
Eva rabha uye pepa shiri yekushongedza imba yevana
Dzidza maitiro ekugadzira iyi shiri diki yemapepa uye evha rabha yekushongedza imba yevana, yakanaka kuita nevana mumhizha.
Evha rabha yakaturika chishongo cheZuva raValentine zvipo
Dzidza maitiro ekugadzira chishongo chakarembera kushongedza imba yako paZuva raValentine kana kupa seyakanyanya tsananguro nhasi.
Rakashongedza bhokisi rekupa paZuva raValentine zviri nyore kwazvo
Dzidza maitiro ekugadzira iyi yepakutanga pendi yekupa pazuva rerudo nehushamwari kana Zuva raValentine uye kushamisika mumwe akakosha
Dzidza kugadzira matryoshka yeRussia kana chidhiraina neiyo rabha mumatanho mashoma uye mhedzisiro yacho ndeyekutanga, yakanaka kushongedza.
Kisimusi ruva nemapepa echimbuzi mapepa ekushongedza
Dzidza maitiro ekugadzira iri ruva reKisimusi kushongedza musuwo wako kana chero kona yeimba yako nekudzokorodza mipumburu yehutsanana mapepa.
Kisimusi wreath yekushongedza muti nekudzokorodza makadhibhokisi
Dzidza maitiro ekugadzira iyi yeKrisimasi wreath yekudzokorora makadhibhodhi kushongedza yako Kisimusi muti uye uite kuti ive yepakutanga kwazvo emazororo aya.
Maitiro ekugadzira tambo yekushongedza uye makobvu muti weKisimusi
Mune ino dzidzo ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira yekushongedza muti weKisimusi netambo uye makomba. Zviri nyore kuita uye chaizvo zvepakutanga zveKisimusi.
Maitiro ekugadzira yakashongedzwa yeKisimusi zvishongo
Mune ino dzidzo ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira zvishongedzo zveKisimusi zvakanaka, ine Nordic maitiro ayo ane fashoni uye akanyorovera kubata kwegoridhe kwemazuva aya.
Maitiro Ekugadzira Tambo Miti uye Nhema Bhinzi paKisimusi
Mune ino dzidzo ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira mimwe yekushongedza tambo miti uye nhema bhinzi yeKisimusi. Vachatarisa vakakura patafura kana pasherefu.
Vaka iyi imba diki nemagnomes, elves kana fairies kuzadza imba yevana nefungidziro uye kushongedza nyaya dzavo
Yakanyanya nyore kudzokorodza kenduru mubati nemakani uye yogati
Dzidza maitiro ekugadzira aya makenduru ekugadzirisa zvakare makani nema yogurts. Pfungwa inoshanda, yakachipa uye mhedzisiro yacho inonakidza kune chero kona yeimba yako
Akanzwa maruva ekushongedza ako DIY hunyanzvi
Dzidza maitiro ekuita aya akanzwa maruva akakwana kushongedza chero basa rehunyanzvi raunaro mupfungwa, rakakura.
Varimi vane maziso-eropa kushongedza Halloween
Dzidza maitiro ekugadzira aya ane ropa-ane maziso eropa macasters, akakwana pakushongedza tafura yako pane inotyisa pati.
Rakanyanya nyore kadhibhodhi uye eva makonzo erabha
Dzidza maitiro ekugadzira aya makonzo neeva rabha uye makadhibhokisi kushongedza mukamuri kadiki kwazvo eimba, iwo akatonyanya epakutanga.
Maitiro ekugadzira ruva rewaya kushongedza hari
Muchidzidzo ichi ndinokuratidza maitiro ekugadzira ruva rewaya kushongedza mapoto uye kuvapa kunakidza uye kwekutanga kubata. Sanganisa mavara uye gadzira zviuru zvemaruva.
Gadzira vhasi nekudzokorodza mabhodhoro egirazi
Muchidzidzo ichi ndinokuratidza zano rekugadzira vhasi nekudzokorodza mabhodhoro egirazi. Isu tinonamira bhodhoro uye nekuisa decoupage.
Anochengeta manotsi. Mifananidzo yakapusa kwazvo
Nechi holder ichi chakagadzirwa nehuni ne eva rubber hauzombokanganwa zvinhu zvaunofanira kuita. Zvinotaridzika zvakanaka kushongedza firiji yako
Nzira yekugadzira makenduru akashongedzwa nemaputi
Kana iwe uchida kushongedza imba yako nemakenduru, ona kuti zviri nyore sei kushongedza kenduru uye riisiye rakakura repakutanga, kushongedza nemanapukeni
Maitiro ekushongedza bhuku remabhuku neHama Beads (ine pateni inosanganisirwa)
Muchidzidzo ichi ndinokuratidza maitiro ekushongedza bhuku remabhuku neHama Beads rinozoipa hupenyu uye mufaro. Gadzirira kudzokera kuchikoro uye gadzira mabhuku ekutanga.
Kana iwe uchida kushongedza imba yako nenzira yekutanga, usarasikirwa nhanho nhanho yekugadzira pendi ine machira mavara, uchishandisa iyo decoupage maitiro.
Mune ino dzidziso ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira michero korona inozovhenekera chero kona, asi zvakare zvakare yakakwana kune mapato uye shopu mahwindo ekushongedza.
Nzira yekugadzira yekushongedza mbiya kubva kune polymer ivhu
Mune ino dzidziso ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira yekushongedza polymer yevhu mbiya nenzira iri nyore kwazvo. Ivo vakanaka kusiya makiyi, zvishongo, mari ...
Nzira yekudzorerazve chimedu chemidziyo
Vandudza imba yako neiyi dzidziso pamusoro penzira yekudzorerazve fenicha. Iri nyore kwazvo uye risingadhuri basa rekuita.
Mabhasikiti ane akapusa epurasitiki makapu
Dzidza maitiro ekugadzira aya mabhasiketi nemapurasitiki makapu kune chero akakosha chiitiko kana yevana pati. Mhedzisiro yacho ndeyekutanga chaiyo.
Maitiro ekugadzira pombi
Muchigadzirwa ichi tichaona maitiro ekugadzira pompu kushongedza pati, tafura yemasaini kana tafura inotapira.
Magneti akatsemurwa ezhizha
Dzidza maitiro ekushongedza firiji yako nemagneti ezhizha mune chimiro cheayo ice cream. Super yakapusa uye mhedzisiro sezvauri kuona yakanaka!
Maitiro ekugadzira yekushongedza pikicha yemucheche kamuri
Kana iwe uri kushongedza kamuri yemwana wako, tarisa padanho nhanho kuti ugadzire pikicha yekushongedza imba yemucheche
Kugadzira hozhwa kushongedza hari
Muchidzidzo ichi ini ndinokuratidza nhanho nhanho yekugadzira hozhwa inonakidza yekushongedza hari. Vagadzire iwo mumavara mazhinji, ichapa hupenyu kune ako zvirimwa.
Makeke makeke akareruka ehunyanzvi evana
Muffin kana makeke makeke dhizeti iro mumakore apfuura rakapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Tinogona…
Nzira yekugadzira maruva emaruva ane lace
Kana iwe uchida hunyanzvi hwakajeka hwekushongedza imba yako kana zuva rekuzvarwa, dzidza maitiro ekugadzira ruva remaruva ane doilies.
Mune ino posvo ini ndinokuratidza maitiro ekugadzira iyi muraraungu rine ruvara ruva kana hari yemaruva yakakwana yekushongedza chero kona yeimba yako uye nekuipa yakanyanya yepakutanga kubata
Maitiro ekugadzira styrofoam koni makenduru
Mune ino dzidzo iwe unodzidza maitiro ekugadzira makenduru ane polystyrene makoni, akakwana ekuisa makenduru marefu kunyanya uye kushongedza chero kona.
3 mazano ekugadzira mabhora ekushongedza
Mune ino dzidziso ini ndinokupa iwe matatu mazano ane nhanho nhanho uye vhidhiyo kugadzira ekushongedza mabhora ane akasiyana masitaera uye maitiro. Sarudza iyo inonyatsokodzera iwe.
Kupenda kwevana butterfly
Dzidza maitiro ekushongedza nursery yemusikana nepurasitiki yakapusa. Mhedzisiro yacho ichakushamisa iwe.
Makonye ane zvikamu nemapombi
Dzidza maitiro ekugadzira aya akanaka makungu nemapompu chete uye zvipfeko zvekupfeka. Mhedzisiro yacho ichave yakanaka. Wakashinga here?
Dzidza maitiro ekugadzira chishongo chakaita kunge bhora kwechirimo. Izvo zvakanaka kushongedza yako kamuri, iwe haugone kupotsa nhanho nhanho!
Maitiro ekugadzira ruva korona nemakeke keke
Mune ino dzidziso iwe unogona kuona nhanho nhanho kugadzira ruva korona ine makeke mafomu. Yakakwana kushongedza chero imwe nzvimbo muchirimo.
Ruva chipo chishongo.
Dzidza maitiro ekugadzira chishongo ichi chakanaka kushongedza zvipo zvako. Zviri nyore kwazvo uye zvakanaka.
Scrapbooking zvinyorwa kana ma tag
Dzidza maitiro ekugadzira aya mavara kana e-scrapbooking tag zviri nyore Izvo zvinoshamisa !!!
Maitiro ekuita moyo nekudzokorodza majee
Maitiro ekugadzirisa zvekare majee ako uye nekushongedza moyo zviri nyore uye nekukurumidza.
Mukudzidzisa kwanhasi tichaona maitiro ekugadzira vhasi rerudo nekushandisa zvakare girazi regirazi. With,…
Makenduru ekushongedza ane mamabule
Dzidza maitiro ekugadzira aya makenduru ekushongedza nezvinhu zvishoma. Izvo zviri nyore kwazvo uye zvepakutanga.
Chishongo chemukova wevabereki chemba yekurara
Maitiro ekugadzira chishongo chemusuwo wemubhedha wemwana, uchishandisa kadhibhodhi nemakadhi kadhibhodhi.
Retro kadhibhodhi pikicha furemu
Dzidza maitiro ekugadzira iyi retro furemu foto iyo inozadza imba yako nekubata kwepakutanga.
Chinja girazi mumubati wekenduru newashi-tepi
Gore kana makore akati wandei apfuura, ini handirangariri zvakanyanya, ma-washi-matepi akave akanyanya fashoni. Asi,…
Garland yematatu akagadzirwa nemachira ane furry
Chinyorwa che DIY nezve maitiro ekugadzira korona ine zvipfeko zvine mvere.
repurpose chigaro sehusiku hwehusiku
Dzidziso yekushandisazve chituru petafura yepadivi nekuwedzera mhando yedengu rakagadzirwa nechidimbu chejira.
Shongedza bhokisi remichero.
Mune ino hunyanzvi tinokuratidza kuti, kutanga kubva mubhokisi remastrawberry, tinogona kuchinja chimiro chayo kuti chishongedze.
Garland neEVA rubber moyo
Chinyorwa che DIY pane maitiro ekugadzira korona yemoyo yakagadzirwa neEVA rabha. Yakanaka kune yakanyanya kushongedza zhizha uye yemapati anopisa.
Zhizha garandi yemabhaluni uye t-shirt shinda
Dzidziso yekuti ungaita sei korona ine mabhaluni uye t-shati yarn. Icho chakakodzera chidzidzo chekushongedza kwepati.
Dzokororazve magirazi emidziyo yezhizha
DIY dzidziso yekuita muzhizha. Yakanaka yekushongedza padziva uye mabhengi mapato. Nedzimwe magirazi egirazi isu tichagadzira mamwe makuru makenduru ekuisira.
Bhodhoro regirazi rakapendwa nemvura yemvura
Dzidziso yekudzokorora bhodhoro uye kurishongedza nemapendi emvura ayo isu tichagadzirisa negirazi varnish.
Pepe pepa uye tambo yemaruva korona
Chinyorwa che DIY chinoratidza maitiro ekugadzira zvachose DIY ruva korona uye yakakwana kupfeka ino mwaka wezhizha mwaka.
DIY Mwoyo Garland
Chinyorwa chekushongedza kwemasikati mapato. Dzidziso yekuita korona ine moyo yakagadzirwa nevha rabha.
Wire maruva uye nzara polish
DIY maitiro ekugadzira maruva nealuminium waya uye chipikiri polish. Nyore uye runako, ivo vakakwana kushongedza kana sechinhu chebvudzi chishongedzo. Uchavada!
Nzira yekugadzira rose neFIMO
DIY chinyorwa chekutanga kune polymer ivhu, mune ino posvo, isu tichaona maitiro ekugadzira rosi mune yakapusa nzira uye iyo inopa yakanaka kwazvo mhedzisiro.
Garland yemapati ane pepa pepa
Yakanaka DIY chinhu chemapato. Muchidzidzo ichi, isu tinodzidza maitiro ekugadzira korona ine pepa repepesi nyore uye nekukurumidza. Yakakwana yemapati ekupedzisira.
Yakasarudzika makiyi, ane akasiyana zvinhu
Tsika makiyi ave ese hasha, uye zviri nyore kuita. Kune akawanda matekinoroji uye zvinhu zvatinogona kushandisa kuti makiyi edu ashongedzwe.
Tafura yemachira ine hura
Tafura yemumhanyi-yerudzi tafura, yakashongedzwa nemabhero (rockery yemavara akasiyana) uye gobvu donje tambo, ichiburitsa yakakosha ruva dhizaini.
Mapikicha akashongedzwa nemiseve uye pombi pombi
Yakashongedzwa clip iyo yakakwana hunyanzvi yekugadzirisa ako clip uye uvape yakasarudzika yekubata. Gadzira ako akashongedzwa clip uye uite iwo akasarudzika uye akasiyana.
Murongi wemitsipa uye mabhegi ane hanger
Dzidziso yemaitiro ekuronga zvishongedzo uye wozviisa zvakanaka pahanger. Iyi DIY ichakubatsira iwe kuzvironga pachako kuti iwe ugare uine izvo zvaunoda paruoko.
Kushongedza korona yakagadzirwa nemabhatani anonakidza
Korona yekushongedza ine mabhatani ekushongedza chero nzvimbo kana kupa seyakare uye nyore kuita ruzivo. Nezvinhu zvakapusa uye zvakanaka.
Pyrography bhokisi riine mufananidzo waunoda
Dzidziso yekuti ungatora sei chifananidzo chakareruka nepirogira pabhokisi kushongedza kana kuchengeta zvinhu.
Garland yemaruva nemwenje
Chinyorwa che DIY nezve maitiro ekugadzira maruva korona yakagadzirwa nepepa repepa. Kune iyi DIY, isu tinoshandisa garandi yemwenje yeKisimusi, maruva uye tepi.
Ruoko-rwakapendwa kanivhasi yekushongedza iyo yakakosha nzvimbo
Yakanaka, yakazara yakagadziriswa ruoko-yakapendwa kanivhasi yekushongedza chero kona. Kuti titore inodiwa Super Hero yeedu madiki
Kugadzira bhokisi remapuranga rakashongedzwa
Nemaitiro akasiyana tichaona maitiro ekugadzira bhokisi rakashongedzwa remapuranga. Rega yako yekufungidzira ibhururuke kuti igadzire yakashongedzwa bhokisi remapuranga
Tongedza kenduru ine washi tepi
Unyanzvi hwakareruka zvekuita nemhuri yese. Shongedza makenduru newashi tepi uye zvishoma fungidziro.
Shongedza huni neine pyrograph
Kushongedza ne pyrograph. Iyi posvo inodzidzisa maitiro ekugadzira rustic dhizaini yakashongedzwa ne pyrograph.
Crepe maruva ekushongedza
DIY maitiro ekugadzira maruva ne crepe kana crepe pepa rekushongedza.
Penda matombo ekushongedza
Chinyorwa che DIY pakushongedza nerwizi kana mabwe egungwa. Mune ino DIY tinowana matombo akapendwa nemajometri motifs ekushongedza.
Gadzira-up hari nebhodhoro rakashandiswazve
Dzidziso yekuti ungaenzanisira sei bhodhoro repurasitiki nekupisa kwesimbi kuti uwane bhodhoro rekuchengetedza iyo meseji yatinoshandisa mazuva ese.
Bhokisi rakashongedzwa nerhinestone kana girazi mabheji
Dzidziso yekuti ungashandure sei kana kushandura huni kana kadhibhodhi bhokisi uine mashoma chete marhinestones kana girazi mabheji. Iyo iri nyore kwazvo DIY yekuita
Pepa ruva sechishongo
Chinyorwa che DIY nezve mapepa ekushongedza. Mune ino chinyorwa iwe unowana zano rekugadzira iro rakajeka bepa ruva kushongedza uye kugadzirisa mamiriro
Kuputira bhuku nehunyanzvi Furoshiki
Chinyorwa nezvechinyakare furoshiki maitiro kana hunyanzvi hwekuputira zvipo nemahengechepfu. Muchidzidzo ichi, tinotsanangura kuputira bhuku.
Pfungwa dzekushongedza zvipo mabhokisi
Chinyorwa che DIY chinoratidza sarudzo dzakasiyana siyana dzekugadzirisa chipo bhokisi. Pfungwa yakakwana yekushandisa yeKisimusi, mazuva ekuzvarwa, zuva raamai ...
Snowflake yekushongedza mahwindo
Chinyorwa nezveKrisimasi kushongedzwa. Mune ino DIY tinokupa zano rekuti ugadzire yako template yekushongedza mahwindo nechando chipfapfaidzo.